ကားမောင်းသူ Booster 2.4 သော့ - အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လိုင်စင် Pro ကို + serial - Softkelo - Unlimited ဆော့ဖ်ဝဲများရှာပါ, ဒါကိုတော့ & hack
နေအိမ် » ပရီမီယံ Cracked » ကားမောင်းသူ Booster 2.4 သော့ – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လိုင်စင် Pro ကို + serial
ကားမောင်းသူ Booster 2.4 သော့ – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လိုင်စင် Pro ကို + serial
အားဖြင့် softkelo | စက်တင်ဘာလ 17, 2017
ကားမောင်းသူ Booster 2.4 သော့ PC ကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲအများစုအမျိုးအစားများများအတွက်ယာဉ်မောင်းကို update လုပ်ဖို့ updated ခဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းဖြစ်ပြီး, Windows ကို operating system ကို run နေလက်ပ်တော့. ယာဉ်မောင်းလွယ်ကူနှင့်အတူစင်ပြိုင်, ကတပ်ဆင်၏လယ်ပြင်၌တောက်ပကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်စဉ်းစားသည်, update ကို, ယာဉ်မောင်းနှင့်ပတ်သက်သောပြဿနာများကိုဖြေရှင်း.
ကြီးမားသော, Softkelo.com သင်တစ်သက်တာဆောင်တတ်၏ ကားမောင်းသူ Booster 2.4 Pro ကို Key ကို, အမြဲတမ်းအဓိပ်ပာယျ, ကြောင်းအသုံးပြုမှုအပေါ်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ. သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါရန်လိုအပ်ပါတယ်ရိုးရှင်းစွာ program ကို run ဖို့ Scan ကိုခလုတ်နှိပ်ဖြစ်ပါသည်, ကြီးမားတဲ့ဒေတာဘေ့စ repositories ကအတူကနှိုင်းယှဉ်, ခေတ်မမီတော့သို့မဟုတ်ပျက်စီး drivers တွေကိုစာရင်းပြုစုဖို့ရာကနေ. ထိုအခါသင်ရုံကို download လုပ်ပါအလိုအလျှောက် install လုပ်ဖို့ကိုနှိပ်ပါရန်လိုအပ်ပါတယ်. ကွန်ပျူတာကို Restart လုပ်ပြီးသင်သည် system ကို speed နဲ့ performance ကိုအသစ်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်.
ယာဉ်မောင်း Booster Download 2.4 သော့
ကားမောင်းသူ Booster 2.4 သော့
ကားမောင်းသူ Booster 2.4 serial IObit ရဲ့အများဆုံးအဆင့်မြင့်ယာဉ်မောင်း update ကိုနည်းပညာနှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, အလိုအလျှောက်အလိုအလြောကျပေါရာဏ drivers တွေကိုဖတ်ခြင်းနှင့်သတ်မှတ်ဖေါ်ပြ, နှင့် downloads, နှင့်တဦးတည်းကလစ်နှင့်သင့်အဘို့ပဲမှန်ကြောင်းနောက်ဆုံးသတင်းများတပ်ဆင်ပြီး. သငျသညျမရေမတွက်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုကယ်တင်.
ဖြည့်စွက်ကာ, ဒီယာဉ်မောင်း update ကိုအထူးအကောင်းဆုံးဂိမ်းစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်ယာဉ်မောင်း tweaks နှင့်အတူလုံခြုံရေးမွမ်းမံမှုများတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ထိပ်တန်း PC ကို performance ကိုသေချာစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် “Restore, နောက်ပြန်လိမ့်သည်. အလားအလာရှိသောလုံခြုံရေးတွင်းကနေသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပိုင်ခွင့်ကားမောင်းသူ update ကို tool ကိုဒါဟာင်, ဟာ့ဒ်ဝဲအောင်မြင်မှုများ, ပဋိပက္ခများကို, နှင့် system ပျက်ကျ.
သငျသညျဒါ့အပြင်လိုနိုင်ပါစေ: Adobe က CC ကို Patcher - တိမ်တိုက် Patch 2017 ရိုက်သံ + Keygen
အပြည့်အဝ features တွေသုံးစွဲဖို့ ကားမောင်းသူ Booster 2.4 လိုင်စင် Key ကို, အစာရှောင်ခြင်းကို download အမြန်နှုန်းအဖြစ်သုံးစွဲဖို့န့်အသတ်နေ့က, သငျသညျအဓိကသော့ချက် IObit ရှိသည်ဖို့လိုအပ် ကားမောင်းသူ Booster2.4. သငျသညျကို Google မှာရှာဖွေတဲ့အခါနောက်ဆုံးပေါ် installation ဖိုင်မျှဝေခြင်းနှင့်ကင်းဒီ post များက ok ဘာမှရှာဖွေမတွေ့ရှိဘဲစိတ်ပူမနေပါနဲ့, ငါသည်သင်တို့ကိုအောင်မြင်စွာ activated လိုင်စင် key ကိုစလှေတျတျော.ကားမောင်းသူ Booster 2.4 ဒေါင်းလုပ်.
ပိုပြီး drivers တွေကို update လုပ်ဖို့အတွက်ဒေတာဘေ့စတိုးချဲ့
ဂိမ်းအစိတ်အပိုင်းများကို VC ကို Runtime ပို updates များကို 2008 & VC ကို Runtime 2012
Added option ကို “Uninstall ကို” devices များ unplugging များအတွက် option ကို
GUI ကိုဒီဇိုင်းအချို့အသေးစား bug တွေ Fixed တိုးတက်လာသောပိုများသောဘော့စျနီးယားမူပြောင်းခြင်း
installation ဖိုင်ပါဝင်သည် + အဆိုပါချုံ့ဖိုင်သို့ထုပ်ပိုးလိုင်စင် key ကို.
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Windows XP ကို / 7/8 / 8.1 / 10 32bit နဲ့ 64bit အပါအဝင်အသုံးဝင်သောများမှာ.
ကားမောင်းသူ Booster 2.4 Key ကိုတပ်ဆင်ခြင်းညွှန်ကြားချက်များ:
ကို turn off / အင်တာနက်ကိုအဆက်ဖြတ်လိုက်ပါ. ဖွင့်လှစ် [Setup.exe] နှင့် software ကို install လုပ်.
installed ပြီးတာနဲ့ပရိုဂရမ်ကို run (IObit Driver Booster) နှင့် reboot ပါဘူး (ပြန်စတင်သည်)
ဒါဟာပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ drivers တွေကို scan ပါလိမ့်မယ်, တစ်ချိန်က scan ဖတ်သွားလာရင်း "အခုဆိုရင် Activate" ရန်>"လိုင်စင် Enter". "key.txt" ဖိုင်နဲ့ငါးပိထံမှသော့မဆို copy.
ဒါပါပဲ. နှစ်သက် ကားမောင်းသူ Booster Pro ကို 2.4 Full Version Download,.
← Adobe က CC ကို Patcher – မိုဃ်းတိမ်ကို Patch 2017 ရိုက်သံ + Keygen Revo Uninstaller Pro ကို Crack – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် Full Version →